China High Quality Electromagnetic Valve Magetsi Mvura Heater Vagadziri uye Vatengesi - Aokai
Musha > Zvigadzirwa > Solenoid Valve BBQ > Electromagnetic Valve Magetsi Mvura Heater
Yakagadzirwa neyemabhizimusi egiredhi yendarira, vharafu iyi inoshora ngura, inowirirana nekutungidza, yakanakira mapurojekiti epamusoro ekupisa, uye inogona kushandiswa nepeturu, mafuta edizili, mafuta eparafini, gasi rechisikigo, mweya etc. Nekuda kwemakemikari akaumbwa endarira, vharuvhu iyi HAIFANirwe kushandiswa nemaprojekti anosanganisira kunwa mvura kana mamwe mapurojekiti emvura.Iri rinotevera sumo yeElectromagnetic Valve Electric Water Heater, ndinovimba kukubatsira kuti unzwisise zviri nani.
1.Electromagnetic Valve Magetsi Mvura Heater Sumo
iyo yakanyanya kusimba uye yakanyanya kuita rabha zvinhu zvinokwanisa kuramba tembiricha yakakwira uye makemikari anoparadza uye zvimwe zvinwiwa zvakaita sepeturu, mafuta edhiziri, oiri, uye mafuta ekuzora.
2.Chigadzirwa Parameter (Specification) yeElectromagnetic Valve Electric Water Heaters
Kuramba kwemukati(20°C) 20mÎ©±10%
Chitubu kumanikidza 2.6N ± 10%
Ambient temprature -10 ° C - 80 ° C
3.Chigadzirwa Kufanirwa kweElectromagnetic Valve Electric Water Heaters
Zvese zvinhu zvine ROHS uye Svika chiyero
4.Product Feature Uye Kushandisa
Iyi vharafu inoteerera kwazvo ichavhura nekuvhara mune isingasviki sekondi imwe painogadzirwa; zvichireva kuti ichavhura kana kuvhara kuyerera ipapo kana yagadziriswa kana kusimbiswa. Zvakare, mainjiniya akaona kuti hupenyu hwevheji iyi hwakapfuura mamirioni kutenderera nemamiriro ekushanda akakodzera uye kugadzirisa.
Iyi vharuvhu HAIYO inoenderera basa vharuvhu uye HAIFANIRI kuve mukushandisa kusingaperi kweanopfuura maawa masere mukutenderera kumwe chete; kuita kudaro kuchapfupisa hupenyu hwevhavha uye kunogona kukonzera musimboti wevhavha kuti utsve. Kana iwe uchida inoenderera yebasa vharafu yeprojekti yako ndapota tsvaga Dzinotsvaga Bhora Magetsi.
Ndeipi nzira yekutakura chigadzirwa?
Kana kunaka kwako kusiri kukuru, tinogona kutumira zvinhu kwauri kuburikidza nekutaura, senge FEDEX, DHL, EMS, TNT, nezvimwewo Kana zvinhu zvako zvakakura, tichakutumira kwauri kuburikidza negungwa kana mhepo, tinogona kutora mutengo wepasi FOB. Ipapo iwe unogona kusarudza kuti shandisa forwarder here kana kuti yako.
Hot Tags: Electromagnetic Valve Electric Water Heaters, China, Hunhu, Fekitari, Yakasimba, Vagadziri, CE, Yemahara Sample, Mutengo, Vatengesi, Zvigadzirwa